Smart Solution - Ningbo Yourlite Imp & Exp Co., Ltd.
NKE OBI ỤKỌ
Ngwọta dị mma sitere na gị LITE
You na-ekpebi otu ịchọrọ ịme ọkụ gị mara mma - YOURLITE na-enye azịza ziri ezi site na ọtụtụ nhọrọ.Ị nwere ike ugbu a họrọ ụzọ smart wee jiri ngwa ma ọ bụ gaa maka nkịtị wee jiri onye enyemaka olu maka ịchịkwa ọkụ gị.Ị nwere ike ịhọrọ teknụzụ dị iche iche: WiFi, Bluetooth (nhazi ngwa ngwa na enweghị ngwaike ọzọ achọrọ), ma ọ bụ Zigbee (nwere ọnụ ụzọ ámá na ọtụtụ nhọrọ ngwaahịa).
UGBUA ANYỊ NA-AKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỌ KWESỊRỊ, ỤLỌ GI NA NA-AMAkwa N'Ọdịnihu.
Ụlọ mara mma na-enye gị ohere imekwu ihe.Ma ị na-eke ikuku zuru oke maka abalị izu ike ma ọ bụ na-ebute vibrato nke ihe nkiri n'ime ụlọ gị, YOURLITE nwere ike inyere gị aka iche echiche banyere okwu ndị dị omimi karịa ọkụ.
Ime ụlọ:Dakọtara ọnọdụ gị na gburugburu gị
N'èzí:Weta mma n'azụ ụlọ gị
KWESỊRỊ NKE DỊ N'ỤRỤ N'ỤRỤ, NA-AKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWASỊ AKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWASỊKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWASỊ AKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWASỊRỊRỊỊRỊỊRỊA NKE N'ỤRỤ
Chọpụta OKWU IKE
+ Iji modul dị ugbu a mepụta ngwaahịa.
+ Chọpụta teknụzụ bọọdụ mgbapu ma belata ọnụ ahịa.
+ Chip nzụta onwe ya, ọrụ igwe ojii, nnwere onwe koodu ngwanrọ.
+ Iji modul oghere, ngwa mmepe ụlọ akwụkwọ sekọndrị kwụụrụ onwe, ghọta ọdịiche dị n'etiti ọrụ na APP.
Ngwaahịa anyị nwere smart dị na teknụzụ WiFi, Bluetooth ma ọ bụ ZigBee.
Enwere ike ijikọ ngwaahịa nwere WiFi na Bluetooth n'ụlọ gị n'ụzọ ọ bụla.
Sistemu anyị dakọtara na sistemu Smart Home – Google Home, Amazon Alexa wdg.
Ịkekọrịta ọ joyụ nke teknụzụ, na-eme ka gburugburu ebe obibi na-ekpo ọkụ.